Aqoonyahanadii Islaamka Ahaa Maxay Dunida Kusoo Kordhiyeen? – Xeernews24
Aqoonyahanadii Islaamka Ahaa Maxay Dunida Kusoo Kordhiyeen?
25. März 2018 /in VIDEO/AUDIO /von admin
Maadaama ay bateen qoraayo fara badan oo soo saara buugaag kala duwan iyagoo kusoo bandhigaya falsafadaha ay sheegteen inay iyagu alifeen, badankoodu waxaa in badan la cadeeyey inay ahaayeen aqoon ay ka tageen dad muslim ahi qarniyo badan ka hore.
Fadlan nala daawo shan kamida falsafadyahanadii islaamku iyo waxyaabaha ay soo kordhiyeen, ha noqoto cilmi baadhis ama xikmado ka saaciday dadyawga caalamka inay sii horumariyaan aqoontaas ay horseedka u ahaayeen.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/03/image-11.jpg 356 531 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-03-25 10:16:552018-03-25 10:16:55Aqoonyahanadii Islaamka Ahaa Maxay Dunida Kusoo Kordhiyeen?
Axmed Madoobe oo War ka soo saaray Xiisad ka dhalatay derbiga Kenya ka dhiseyso... Shucuubta adduunka ugu wahsigga badan